के तपाई ट्रायल फेल भएर हैरान हुनभएको छ ? ध्यान दिनुहोस् यी कुरामा… – Fewa Times
के तपाई ट्रायल फेल भएर हैरान हुनभएको छ ? ध्यान दिनुहोस् यी कुरामा…
प्रकाशित मिति: April 30, 2018 11:40 am
काठमाडौं – उपत्यकाका सबैजसो यातायात कार्यालयमा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको ट्रायल दिनेहरुको लाइन लाग्ने गरेको छ । घण्टौं लाइनमा बसेर ट्रायल परीक्षाका लागि फर्म भरेकाहरु सानो गल्तीका कारण ट्रायलमा फेल हुँदै आएका छन् ।
आत्मबल – ट्रायल परीक्षा दिन लागेका परीक्षार्थी डराउनु हुँदैन, आत्तिनु हुँदैन । आत्मबल उच्च बनाउनु पर्छ । ट्रायल परीक्षा दिनुभन्दा पहिला सिक्ने क्रममा सजिलै पास गर्नेहरु ट्रायलमा फेल हुने गरेका छन् । कमजोर आत्मबलका कारण नै फेल हुने गरेको हो । त्यसकारण आत्मबल उच्च राख्नुहोस् । ढुक्कसँग ट्रायल दिनुहोस् ।
हेल्मेट तथा स्ट्याण्ड – ट्रायलमा फेल हुनुको अर्को सामान्य तर धेरैले ध्यान नदिएको कुरा हेल्मेट हो । तपाई हेल्मेट लगाउनुहुन्छ तर हेल्मेटको फित्ता लगाउन बिर्सनुभयो सबै कुरा पास गरे पनि तपाई फेल हुनुहुन्छ । त्यसैले हेल्मेट लगाउने बित्तिकै फित्ता पनि लगाउनुहोस् ।
मोटरसाइकल तथा स्कुटर स्र्टाट गरेर एट (8) फिगरभित्र छिरिसकेपछि पँहेलो रेखा छुन, खुट्टा टेक्न र स्र्टाट बन्द गर्नु हुँदैन ।
एकपटक एट (8) फिगर पूरा गरिसकेपछि पुनः आधा एट (8) गर्नुपर्छ ।
एट (8) फिगर कटाएपछि अगाडि जेब्राक्रस आउँछ । जेब्राक्रसमा जानुभन्दा अघि ट्राफिक बत्ती हेर्नुपर्छ । रातो र पँहेलो बत्ती बलेमा जेब्राक्रसमलाई नछोई रोक्नुपर्छ ।
उकालोमा दुबै धर्काहरु नछोई स्टप (stop) लेखेको ठाउँमा रोक्नुपर्छ ।